Marketing amin'ny finday: Jereo ny tena mety amin'ireto ohatra ireto | Martech Zone
Fivarotana finday - zavatra mety efa renao io, saingy, azo inoana, fa hiala amin'ny mpandoro lamosina amin'izao fotoana izao. Rehefa dinihina tokoa, misy fantsona maro isan-karazany azo alaina ao amin'ny orinasa, tsy ny marketing amin'ny finday ve no azo tsinontsinoavina?
Azo antoka - afaka mifantoka amin'ny 33% ny olona iza no tsy mampiasa fitaovana finday fa tsy. Ny fampiasana fitaovana finday manerantany dia antenaina hitombo ho 67% amin'ny taona 2019, ary tsy lavitra an'izany isika izao. Raha tsy tianao ny tsy miraharaha ny ampahany betsaka amin'ny tsena dia mila manamarika ny marketing amin'ny finday ianao.
Mobile Marketing Mahatsapa ho an'ny mpanjifa
Oviana no fotoana farany nandehananao tany amin'ny toerana tsy nisy finday finday avo lenta? Sa nandeha tany amin'ny toerana hafa izay tsy nananan'ny olon-kafa? Ny fitaovana finday, indrindra ny finday avo lenta, dia manome antsika ny fampahalalana ilaintsika amin'ny fomba mety.
Afaka mampiasa rindranasa, mpanampy virtoaly isika, ary manamarina ny mailaka anay mihitsy aza. Matetika ny fitaovantsika dia tsy miala amin'ny sisintsika. Noho izany, tsy misy dikany ve ny famarotana ny orinasanao amin'ny olona amin'ny findainy?
Mobile Marketing Mahatonga fahatsapana ho an'ny orinasa
Ho an'ny famoahana somary ambany dia afaka mamorona fanentanana isan-karazany mifanaraka amin'ny tsenanao sy ny teti-bolanao ianao.
A fampiharana natao tsara, ohatra, dia afaka manampy amin'ny famoahana ny varotra. Tombony ho azy ny ASDA raha ny fanamafisana ny varotra an-tserasera. Ny fampiharana dia nakarina indroa 2 tapitrisa, manaporofo fa vonona ny hiaraka amin'ilay orinasa ny mpanjifa. Ny varotra amin'ny alàlan'ny fampiharana dia avo kokoa 1.8 avo lenta noho izy ireo amin'ny solosaina birao.
Tamin'ny ankapobeny, nahomby ny tetik'asa.
Saingy ny apps dia tsy vahaolana mety amin'ny orinasa tsirairay. Inona no ifantohanao amin'izay?
Famolavolana finday mamaly
Walmart dia nampihena ny fotoana laniny ankapobeny tamin'ny 7.2 segondra hatramin'ny 2.3 segondra. Tsy dia manaitra loatra izany raha tsy azonao ny manodidina 53% ny olona mitsangatsangana amin'ny tranonkala iray izay maharitra telo segondra mahery ny entana.
Tamin'ny alàlan'ny fanatsarana sary fotsiny, fanovana endritsoratra, ary fanesorana ny fanakanana Java, Walmart dia afaka nampihena ny fotoana lanin'ny tranokala. Nisy vokany ve izany? Raha heverina fa nitombo 2% ny taham-panovana dia azo antoka fa nanao izany.
Nissan dia nandray famolavolana mamaly amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny famoronana horonantsary mifandray. Raha nahita zavatra tianao ianao, ny paompy kely amin'ny efijery dia ho ampy hamoahana ireo antsipiriany rehetra mifandraika amin'izany. Nahomby tokoa ny fampielezan-kevitra tamin'ny taha 78% ary 93% ny tahan'ny firotsahana.
Ny marketing amin'ny finday dia fitaovana matanjaka izay manolotra mpivarotra fomba maro isan-karazany izay tena mandaitra na eo amin'ny lafiny fiantraikany na ho an'ny orinasa. Izy io dia mandrakotra zavatra betsaka kokoa noho ny fampiharana na tranokala voavolavola ihany.
Ity misy zavatra hafa azonao raisina ho an'ny orinasanao:
Doka anaty lalao
Serivisy miorina amin'ny toerana
Raha, amin'ny maha orinasa anao, dia tadiavinao ny ROI faran'izay betsaka raha ny volanao amin'ny marketing no manome anao fomba iray hanatonana ny mpanjifa amin'ny vidiny ambany dia kely. Fotoana izao hanombohan'ny orinasanao mandray ny herin'ity fitaovana mandaitra ity.
Zahao ity infographic mahavariana ity avy amin'ny Appgeeks.org, feno ohatra, Ahoana ny fampiasan'ny orinasa ny varotra finday amin'ny tombotsoany. Appgeeks.org dia manome ny mpamaky angon-drakitra mifandraika amin'ny mpanome fampiharana finday avo lenta.
Tags: appendeksasdaBluetoothCarl's jrDunkin 'DonutsmailakaFordHalifaxtrano fanatobiana tranoikeaDoka anaty lalaoKLMlbmserivisy mifototra amin'ny toeranaohatra amin'ny marketing amin'ny findayFanodinana tranokalaNissanpizzafanindriana fampandrenesanaQR Codestrano fandraisam-bahiny menaseza tan tanSMSStarbuckslakolosy tacoclubclub taotopshopWalmart